အိုင်တီဆိုတာဘာလဲ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > အိုင်တီဆိုတာဘာလဲ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 8:49 PM နည်းပညာဗဟုသုတ
[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန်ကျွန်တော်မှန်းတာ မမှားရင် ခင်ဗျားအနေနဲ့ အိုင်တီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူး မြင်ဖူးတာ မနည်းလောက်တော့ဘူး.. မြင်ပါများလို့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလိုက်ရင် အော် အိုင်တီ များကွာလို့တွေးပြီး ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဖုန်းတွေ ခေါင်းထဲတောင် ပေါ်ရင်ပေါ်လာလောက်တယ်..
ဒီတော့ ကျွန်တော်က မေးခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်မယ်.. အိုင်တီဆိုတာ ဘာလဲ နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါလား.. ဆေးပညာဆိုတာ အနာရောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့၊ Engineering ဆိုတာ တိုက်တာ အဆောက်အဦတွေ၊ စက်ပစ္စည်းအသစ်တွေ တည်ထွင်ဖို့ ဆိုတာလိုမျိုး တိတိကျကျ အဖြေကိုလိုချင်တာ..
အိုင်တီဆိုတာ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ လူတွေကိုချိတ်ဆက် အင်တာနက်သုံး YouTube ကြည့်လို့ရ၊ စာတွေပို့လို့ရဆိုတဲ့ မရေမရာ အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘူး..“ဆေးပညာဆိုတာ အနာရောဂါတွေ ပျောက်ကင်း သက်သာအောင် လုပ်တာ” ဆိုတာလိုမျိုး တစ်ခွန်းထဲနဲ့ တိကျတဲ့ အဖြေကိုလိုချင်တာ..
အကယ်လို့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဘာပြောရမှန်းမသိဘဲ သိသလိုလို မသိသလိုလိုပဲ ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးကို ဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်..
အမှန်တော့ လူတစ်ရာမှာ ကိုးဆယ်ကျော်လောက်က ဒီလိုပဲ IT ဆိုတာ ကို သိတယ်လို့ထင်နေပေတဲ့ တကယ်တမ်းကောက်မေးလိုက်ရင်မသိတော့ဘူး.. နောက်ဆက်တွဲကတော့ အိုင်တီဆိုတာ ဖုန်းပြင်တာလို့ ထင်တဲ့လူကထင်၊ အသစ်ထွက်တဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း Review တွေကို အိုင်တီထင်တဲ့လူကထင်နဲ့ “မျက်မြင်ပုဏ္ဏား ခြောက်ယောက်” ရဲ့ ဆင်လို အိုင်တီဆိုသဟာကြီးဟာ တစ်ယောက်တမျိုးစီ သောက်အိုးစည်တွေဖြစ်ပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းကို ဖြစ်နေတော့တယ်..
အဘိဓါန်တွေမှာတော့ IT ကို
ဆိုတာလိုမျိး ဖွင့်ကြတယ်.. ကွန်ပျူတာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များ သိမ်းဆည်း၊ ရယူ၊ ဖြန်‌‌ဝေခြင်းကို လေ့လာသည့် ဘာသာရပ် လို့ပဲ အကြမ်းဖျင်းဆိုပါတော့.. ကျွန်တော့် အမြင်တော့ အဘိဓါန်ထဲ ပါတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ လုံလောက်တယ်.. အလို အပိုမရှိဘူး.. တိကျတယ်ပေါ့..
ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက ကျွန်တော် စာသင်ပေးဖူးတဲ့လူအများစုကို အဲ့ဒါကြီးသွားပြရင် နားမလည်ကြဘူး.. သေချာလေ့လာကြည့်တော့ လူအများစု နားမလည်တာက Information ဆိုတာ ဘာကြီးကို သိပ်မရှင်းကြတာ.. တခြာမျက်စိလည်စရာ Data ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်း ရှိနေသေးတာကိုး..
ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရမယ်ဆို ကိုယ့် Messenger ထဲစာရိုက်ပြီး သူငယ်ချင်းဆီစာလှမ်းပို့တာလောက်ကစလို့ ဟိုး Google လောက်အထိဟာ Data to Information Lifecycle ပဲ.. ပြောရရင် Data နဲ့ Information သံသရာ လည်နေတာပဲ.. ရှင်းကာမှ တော်တော်ရှုပ်နေပြီမဟုတ်လား 😂
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အခြေခံလေးတွေကနေ နည်းနည်းပြန်စကြည့်ရအောင် .. IT နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် အခြေခံမှာ မပါမဖြစ် နှစ်ခုက Data နဲ့ Information ပဲ. ဒီတော့ Data ဆိုတာဘာလဲ Information ဆိုတာဘာလဲ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရင် နားလည်ဖို့ ခက်နေမှာပဲ…
ဥပမာ ပုဂံမှာ ဟိုတယ်အလုံး တစ်ရာ ရှိတယ်.. ဒါက Data (အချက်အလက်) ပဲ.. အဲ့လို အချက်အလက်မျိုးဟာ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ တခြား အချက်အလက်ပေါ်မှာ အမီပြုတဲ့ အခွန်ဌာနလိုမျိုးအတွက်အသုံးဝင်ပေမဲ့ ပုဂံဘုရားဖူး သွားရင် တည်းဖို့ နေရာ ရှာနေသူတွေအတွက်တော့ ဘာမှ အသုံးမဝင်ဘူး..
ဘုရားဖူးသွားရင် တည်းဖို့ ဟိုတယ်ရှာနေတဲ့လူက ပုဂံမှာ ဟိုတယ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာထက် ဈေးအသင့်ဆုံးဟိုတယ်တွေ၊ မြိုထဲနဲ့ အနီးဆုံးဟိုတယ်တွေ၊ အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွေ စတာလိုမျိုး သုံးစားလို့ရမယ့် အချက်အလက် (Information) ကိုပိုလိုချင်ကြတယ်..
အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်ဆယ်လုံးဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်(Information) ကို ဘယ်ကရလဲဆိုတော့ ဟိုတယ် အလုံးတစ်ရာ ရှိတဲ့ဆိုတဲ (Data) ပေါ်က မှ အခြေခံပြီးရတယ်..
နောက်ထပ် သိထားစရာတစ်ခုကတော့ တချို့လူတွေအတွက် Data ဟာ တချို့လူတွေအတွက် Information ဖြစ်နေနိုင်တယ်.. ပုံဂံမှာ ဟိုတယ်အလုံးတစ်ရာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ ဘုရားဖူးသွားမယ့်လူအတွက်တော့ Data ပဲ .. သိပ်သုံးလို့ မရဘူး.. ဒါပေမဲ့ အခွန်ဌာန အတွက်တော့ ပုဂံမှာ ဟိုတယ်အလုံးတစ်ရာ ရှိတယ်ဆိုတာက Information ပဲ .. သူတို့အတွက် ဘယ်ဟိုတယ်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာက အရေးမကြီးဘူး.. သူတို့အလုပ်က ဒီဟိုတယ် အလုံးတစ်ရာလုံးဆီက ခွင်ဖန် .. မှားလို့ အခွန်ကောက်ရမယ်..
ဒီလောက်ဆိုရင် Data နဲ့ Information ကို အကြမ်းသဘောလောက်တော့ နားလည်ပြီလို့ ယူဆတယ် (နားမလည်လည်း ထပ်မရှင်းပြတော့ဘူး.. စာရိုက်ရတာ လက်လည်း ညောင်းလှပြီ).. ဒီတော့ မူလ ပြဿနာ ဖြစ်တဲ့ IT ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကြီးကို တချက် ပြန်သွားကြည့်ရအောင်..
ပြောရရင် Information Technology ဆိုတာကြီး ခေတ်မစားခင် ကတည်းက ပုဂံမှာ ဟိုတယ်ဘယ်နှစ်လုံးရှိသလဲ.. ဘယ်ဟိုတယ် အကောင်းဆုံးလည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ရှိပြီးဖြစ်တယ်.. အရင်ခေတ်ကတော့ သူ့ခေတ်သူ့ အခါအလျှောက် ဟိုတယ်ဘယ်နှလုံး ရှိလဲ သိချင်ရင် စာအုပ်ကြီးတွေနဲ့ စာရင်းမှတ်ထားရတယ်.. ဘယ်ဟိုတယ် အကောင်းဆုံးလဲ သိချင်ရင် လမ်းညွှန်လိုမျိုးကိုမေးရတယ်..
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကိုယ်သိချင်တာ တစ်ခုသိရဖို့ အချိန်ကြာတယ်ပေါ့.. ကွန်ပျူတာတွေပေါ်လာတယ်.. အိုင်တီဆိုသဟာကြီးဟာ လူတိုင်းနီးပါး ပါးစပ်ဖျားရောက်လာတယ်.. ခုခေတ်မှာ ပုဂံမှာ ဟိုတယ် ဘယ်နှလုံးရှိလဲ သိဖို့ .. ခုလက်ရှိ ရုံတင်နေတဲ့ဇာတ်ကားတွေသိဖို့ …. ဆယ်လီဗျစ်တီတွေကနေ လမ်းထိပ်က အကြော်သည်ရဲ့ အတင်းအဖျင်းကို သိဖို့ Yellow Pages လှန်စရာမလို၊ ရုပ်ရှင်ရုံတန်းကိုသွားစရာမလို၊ ဂျာနယ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ လှန်ကြည့်စရာမလိုသလို ရပ်ကွက်ထဲ ဆင်းအတင်းတုပ်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး..
အချုပ်ပြောရရင်တော့ IT ဆိုတာ လူတွေ လိုအပ်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရယူ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ပညာရပ်ပါပဲ..
ထွက်သမျှ ဖုန်းရီဗျူးတွေဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် အိုင်တီ စိတ်ဝင်စားသူကြီးထင်နေရင်တော့ မောင်တို့ မယ်တို့ဟာ ဖုန်းကြိုးသွယ်ထားတဲ့ ဓါတ်တိုင်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို Graham Bell ဖြစ်လာမယ့်လူတွေလို့ အထင်ရောက်နေတယ်လို့ပဲ ပြောချင်တယ်..
[Unicode]ဖွငျ့ဖတျရနျ ကြှနျတျောမှနျးတာ မမှားရငျ ခငျဗြားအနနေဲ့ အိုငျတီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကွားဖူး မွငျဖူးတာ မနညျးလောကျတော့ဘူး.. မွငျပါမြားလို့ တဈယောကျယောကျက ပွောလိုကျရငျ အျော အိုငျတီ မြားကှာလို့တှေးပွီး ကှနျပြူတာတှေ၊ ဖုနျးတှေ ခေါငျးထဲတောငျ ပျေါရငျပျေါလာလောကျတယျ..
ဒီတော့ ကြှနျတျောက မေးခှနျးတဈခုမေးကွညျ့မယျ.. အိုငျတီဆိုတာ ဘာလဲ နညျးနညျးလောကျရှငျးပွပါလား.. ဆေးပညာဆိုတာ အနာရောဂါတှပြေောကျကငျးဖို့၊ Engineering ဆိုတာ တိုကျတာ အဆောကျအဦတှေ၊ စကျပစ်စညျးအသဈတှေ တညျထှငျဖို့ ဆိုတာလိုမြိုး တိတိကကြ အဖွကေိုလိုခငျြတာ..
အိုငျတီဆိုတာ ကှနျပြူတာတှနေဲ့ လူတှကေိုခြိတျဆကျ အငျတာနကျသုံး YouTube ကွညျ့လို့ရ၊ စာတှပေို့လို့ရဆိုတဲ့ မရမေရာ အဖွမြေိုးမဟုတျဘူး..“ဆေးပညာဆိုတာ အနာရောဂါတှေ ပြောကျကငျး သကျသာအောငျ လုပျတာ” ဆိုတာလိုမြိုး တဈခှနျးထဲနဲ့ တိကတြဲ့ အဖွကေိုလိုခငျြတာ..
အကယျလို့ ခငျဗြားအနနေဲ့ ဘာပွောရမှနျးမသိဘဲ သိသလိုလို မသိသလိုလိုပဲ ဆိုရငျတော့ ဒီဆောငျးပါးကို ဆုံးအောငျဖတျကွညျ့သငျ့တယျ..
အမှနျတော့ လူတဈရာမှာ ကိုးဆယျကြျောလောကျက ဒီလိုပဲ IT ဆိုတာ ကို သိတယျလို့ထငျနပေတေဲ့ တကယျတမျးကောကျမေးလိုကျရငျမသိတော့ဘူး.. နောကျဆကျတှဲကတော့ အိုငျတီဆိုတာ ဖုနျးပွငျတာလို့ ထငျတဲ့လူကထငျ၊ အသဈထှကျတဲ့ ကှနျပြူတာ၊ ဖုနျး Review တှကေို အိုငျတီထငျတဲ့လူကထငျနဲ့ “မကျြမွငျပုဏ်ဏား ခွောကျယောကျ” ရဲ့ ဆငျလို အိုငျတီဆိုသဟာကွီးဟာ တဈယောကျတမြိုးစီ သောကျအိုးစညျတှဖွေဈပွီး ဖွဈခငျြတိုငျးကို ဖွဈနတေော့တယျ..
အဘိဓါနျတှမှောတော့ IT ကို
ဆိုတာလိုမြိး ဖှငျ့ကွတယျ.. ကှနျပြူတာမြားနှငျ့ ဆကျသှယျရေး နညျးပညာမြားကို အသုံးပွု၍ သတငျးအခကျြအလကျမြား သိမျးဆညျး၊ ရယူ၊ ဖွနျ‌‌ဝခွေငျးကို လလေ့ာသညျ့ ဘာသာရပျ လို့ပဲ အကွမျးဖငျြးဆိုပါတော့.. ကြှနျတေျာ့ အမွငျတော့ အဘိဓါနျထဲ ပါတဲ့ ဖှငျ့ဆိုခကျြဟာ လုံလောကျတယျ.. အလို အပိုမရှိဘူး.. တိကတြယျပေါ့..
ဒါပမေဲ့ ပွဿနာက ကြှနျတျော စာသငျပေးဖူးတဲ့လူအမြားစုကို အဲ့ဒါကွီးသှားပွရငျ နားမလညျကွဘူး.. သခြောလလေ့ာကွညျ့တော့ လူအမြားစု နားမလညျတာက Information ဆိုတာ ဘာကွီးကို သိပျမရှငျးကွတာ.. တခွာမကျြစိလညျစရာ Data ဆိုတဲ့စကားလုံးကလညျး ရှိနသေေးတာကိုး..
ကြှနျတေျာ့ အမွငျပွောရမယျဆို ကိုယျ့ Messenger ထဲစာရိုကျပွီး သူငယျခငျြးဆီစာလှမျးပို့တာလောကျကစလို့ ဟိုး Google လောကျအထိဟာ Data to Information Lifecycle ပဲ.. ပွောရရငျ Data နဲ့ Information သံသရာ လညျနတောပဲ.. ရှငျးကာမှ တျောတျောရှုပျနပွေီမဟုတျလား 😂
ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ အခွခေံလေးတှကေနေ နညျးနညျးပွနျစကွညျ့ရအောငျ .. IT နဲ့ ပတျသတျလာရငျ အခွခေံမှာ မပါမဖွဈ နှဈခုက Data နဲ့ Information ပဲ. ဒီတော့ Data ဆိုတာဘာလဲ Information ဆိုတာဘာလဲ ကှဲကှဲပွားပွား မသိရငျ နားလညျဖို့ ခကျနမှောပဲ…
ဥပမာ ပုဂံမှာ ဟိုတယျအလုံး တဈရာ ရှိတယျ.. ဒါက Data (အခကျြအလကျ) ပဲ.. အဲ့လို အခကျြအလကျမြိုးဟာ စီးပှားရေးသမားတှနေဲ့ တခွား အခကျြအလကျပျေါမှာ အမီပွုတဲ့ အခှနျဌာနလိုမြိုးအတှကျအသုံးဝငျပမေဲ့ ပုဂံဘုရားဖူး သှားရငျ တညျးဖို့ နရော ရှာနသေူတှအေတှကျတော့ ဘာမှ အသုံးမဝငျဘူး..
ဘုရားဖူးသှားရငျ တညျးဖို့ ဟိုတယျရှာနတေဲ့လူက ပုဂံမှာ ဟိုတယျဘယျနှလုံးရှိတယျဆိုတာထကျ စြေးအသငျ့ဆုံးဟိုတယျတှေ၊ မွိုထဲနဲ့ အနီးဆုံးဟိုတယျတှေ၊ အကောငျးဆုံးဟိုတယျတှေ စတာလိုမြိုး သုံးစားလို့ရမယျ့ အခကျြအလကျ (Information) ကိုပိုလိုခငျြကွတယျ..
အကောငျးဆုံး ဟိုတယျဆယျလုံးဆိုတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျ(Information) ကို ဘယျကရလဲဆိုတော့ ဟိုတယျ အလုံးတဈရာ ရှိတဲ့ဆိုတဲ (Data) ပျေါက မှ အခွခေံပွီးရတယျ..
နောကျထပျ သိထားစရာတဈခုကတော့ တခြို့လူတှအေတှကျ Data ဟာ တခြို့လူတှအေတှကျ Information ဖွဈနနေိုငျတယျ.. ပုံဂံမှာ ဟိုတယျအလုံးတဈရာ ရှိတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စဟာ ဘုရားဖူးသှားမယျ့လူအတှကျတော့ Data ပဲ .. သိပျသုံးလို့ မရဘူး.. ဒါပမေဲ့ အခှနျဌာန အတှကျတော့ ပုဂံမှာ ဟိုတယျအလုံးတဈရာ ရှိတယျဆိုတာက Information ပဲ .. သူတို့အတှကျ ဘယျဟိုတယျအကောငျးဆုံးလဲဆိုတာက အရေးမကွီးဘူး.. သူတို့အလုပျက ဒီဟိုတယျ အလုံးတဈရာလုံးဆီက ခှငျဖနျ .. မှားလို့ အခှနျကောကျရမယျ..
ဒီလောကျဆိုရငျ Data နဲ့ Information ကို အကွမျးသဘောလောကျတော့ နားလညျပွီလို့ ယူဆတယျ (နားမလညျလညျး ထပျမရှငျးပွတော့ဘူး.. စာရိုကျရတာ လကျလညျး ညောငျးလှပွီ).. ဒီတော့ မူလ ပွဿနာ ဖွဈတဲ့ IT ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကွီးကို တခကျြ ပွနျသှားကွညျ့ရအောငျ..
ပွောရရငျ Information Technology ဆိုတာကွီး ခတျေမစားခငျ ကတညျးက ပုဂံမှာ ဟိုတယျဘယျနှဈလုံးရှိသလဲ.. ဘယျဟိုတယျ အကောငျးဆုံးလညျးဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှဟော ရှိပွီးဖွဈတယျ.. အရငျခတျေကတော့ သူ့ခတျေသူ့ အခါအလြှောကျ ဟိုတယျဘယျနှလုံး ရှိလဲ သိခငျြရငျ စာအုပျကွီးတှနေဲ့ စာရငျးမှတျထားရတယျ.. ဘယျဟိုတယျ အကောငျးဆုံးလဲ သိခငျြရငျ လမျးညှနျလိုမြိုးကိုမေးရတယျ..
ဘာဖွဈလဲဆိုတော့ ကိုယျသိခငျြတာ တဈခုသိရဖို့ အခြိနျကွာတယျပေါ့.. ကှနျပြူတာတှပေျေါလာတယျ.. အိုငျတီဆိုသဟာကွီးဟာ လူတိုငျးနီးပါး ပါးစပျဖြားရောကျလာတယျ.. ခုခတျေမှာ ပုဂံမှာ ဟိုတယျ ဘယျနှလုံးရှိလဲ သိဖို့ .. ခုလကျရှိ ရုံတငျနတေဲ့ဇာတျကားတှသေိဖို့ …. ဆယျလီဗဈြတီတှကေနေ လမျးထိပျက အကွျောသညျရဲ့ အတငျးအဖငျြးကို သိဖို့ Yellow Pages လှနျစရာမလို၊ ရုပျရှငျရုံတနျးကိုသှားစရာမလို၊ ဂြာနယျတှေ၊ မဂ်ဂဇငျးတှေ လှနျကွညျ့စရာမလိုသလို ရပျကှကျထဲ ဆငျးအတငျးတုပျစရာလညျး မလိုတော့ဘူး..
အခြုပျပွောရရငျတော့ IT ဆိုတာ လူတှေ လိုအပျနတေဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို ပိုပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျ ရယူ ဖွနျ့ဖွူးပေးနိုငျအောငျ လုပျဆောငျပေးတဲ့ ပညာရပျပါပဲ..
ထှကျသမြှ ဖုနျးရီဗြူးတှဖေတျပွီး ကိုယျ့ဟာကိုယျ အိုငျတီ စိတျဝငျစားသူကွီးထငျနရေငျတော့ မောငျတို့ မယျတို့ဟာ ဖုနျးကွိုးသှယျထားတဲ့ ဓါတျတိုငျကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို Graham Bell ဖွဈလာမယျ့လူတှလေို့ အထငျရောကျနတေယျလို့ပဲ ပွောခငျြတယျ..
အိုင်တီဆိုတာဘာလဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:49 PM Rating:5[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် ကျွန်တော်မှန်းတာ မမှားရင် ခင်ဗျားအနေနဲ့ အိုင်တီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူး မြင်ဖူးတာ မနည်းလောက်တော့ဘူး.. မြင်ပါများလို...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:49 PM